तिलोत्तमा, चैत ४ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराएको छ । किशोरीलाई रजस्वला हुँदा पनि नियमित विद्यालय आउन प्रोत्साहित गर्नका लागि स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो...
तिलोत्तमा, चैत ४ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ९ मंगलापुरमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । केन्द्रको सोमबार आयोजित एक समारोहबीच तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे र उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीले...
सरकारको व्यवहारले द्वन्द्वरत पक्षलाई आर्कमक गराएको छ : वालकृष्ण खांण
बुटवल, २ चैत । नेपाली कांगे्रसका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खांणले वर्तमा संविधानको मर्म विपरित सरकारले सिके राउतसंग सहमति गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मुलधारमा नआएका दल तथा समूहलाई वार्ता र सम्बादको...
बुटवल, १ चैत । गुल्मीको समग्र चिनारी झल्केको रमाइलो रोइला गीत “गुल्मी” सार्बजनिक भएको छ । बुटवलमा सम्पन्न एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश नं. ५ का सामाजीक बिकाश मन्त्री सुदर्शन बरालले क्लिक गर्दै युट्युबमा गीत...
आज विश्व मृगौला दिवस मुटु, अस्पताल बुटवलले गरेको प्रभातफेरी (फोटो फिचर)
बुटवल, ३० फागुन । विश्व मृगौला दिवस २०१९ को अवसरमा बुटवलमा बृहत् प्रभातफेरी गरिएको छ । बुटवलमा रहेको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी आयोजना गरेको हो । बुटवल १० रामनगर स्थित अस्पतालबाट...
दश करोडको कारोवार गर्दै देवदह मेला सकियो
शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन ब्यवसायिद्वारा ईप्रकाको माग बुटवल, २८ फागुन । देवदहमा जारी पाँचौ राष्ट्रिय देवदह औद्योगिक ब्यापार मेला कृषि तथा पर्यटन महोत्सव मंगलबार सकिएको छ । मेलाको करिव ३ लाख दर्शकले अवलोकन गरेको र...
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले कारागार सार्न गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन
भैरहवा, २७ फागुन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले जिल्ला कारागारलाई स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले ज्ञापन पत्र बुझाई मन्त्रीलाई ओमसतियामा रहेको जमिनमा कारागार स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो । प्रदेश पाँचको सुरक्षा...
‘प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक बन्दा देवदहमा हत्या श्रृंखला दोहोरीए’
ब्यवसायिक तीन संस्थाद्वारा आईतबारको घटना प्रति दुख ब्यक्त बुटवल, २७ फागुन । रुपन्देहीको देवदहमा हुने गरेका श्रृंखलाबद्ध घटनाले आम नागरिकसँगै ब्यवसायिलाई त्रसित पारेको भन्दै स्थानीय ब्यवसायिक संघसंस्थाले प्रहरीप्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वर्षेनी अपराधिक घटनाहरु...
देवदह उपप्रमुख द्वारा अक्षयकोष स्थापना
बुटवल, २६ फागुन । देवदह नगरपालिकाकी उपप्रमुख विद्या लक्ष्मी गुरुङले जन्मदिनको अवसरमा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना गरेकि छिन् । देवदह नगरपालिका वडा नंं ६ मा रहेको सत्यसाही विद्या पिठमा उपप्रमुख गुरुङले जन्मदिनको अवसरमा अक्षयकोष स्थापना...